Vaovao - Chip IC nanisy marika an'ny Visual Visual System
Ny chip dia mpitatitra boribory miharo, izay mizara wafer maromaro, ary teny ankapobeny ho an'ny singa semiconductor. Ny chip IC dia afaka mampifangaro singa elektronika isan-karazany amin'ny takelaka silicone mba hamorona faritra iray, mba hahatratraranao asa manokana. Mba hanavahana ireo chips, mila manisy marika izy, toy ny isa, ny litera ary ny logo. Miaraka amin'ny toetra mampiavaka ny halehibe kely sy ny hakitroka fampifangaroana avo dia avo dia avo tokoa ny fikirakirana ny chip. Raha heverina fa ny famokarana puce dia matetika atao amin'ny atrikasa tsy misy vovoka, ary ny marika dia tsy maintsy maharitra ary manana ny asan'ny anti-counterfeiting, ny milina fanamarihana laser no safidy voalohany indrindra.
Ny milina laser dia tsara dia tsara, izay afaka manisy marika maharitra, ary ny endri-tsoratra dia tsara tarehy sy tsara tarehy, ary tsy hanimba ny asan'ny puce. Ny milina fanamarihana puce namboarina tamin'ny laser BOLN dia mandray endrika maodely sy azo hamarinina, izay afaka mahatsapa famokarana betsaka ary mety mifanaraka amin'ny vokatra isan-karazany amin'ny famaritana samihafa. Miaraka amin'ny rafitra fametrahana ny fahitana CCD, ity fitaovana ity dia mety hahatratra ny effetsan'ny fanamarihana laser tsy misy hadisoana.
Ny fiasan'ny masinina dia ny laharam-pahamehana amin'ny toeran'ny maso maso CCD, izay afaka mamantatra ho azy ireo vokatra sy mahazo toerana haingana. Ny zavatra madinidinika koa dia azo asiana marika mazava tsara. Ary ny filan'ny fametahana vokatra dia tsy ilaina, mampihena ny fandraisana anjaran'ny tanana ary manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Ny vokatra voahodina dia mety ho endrika boribory, toradroa ary tsy ara-dalàna. Ity dingana ity dia mety indrindra amin'ny vokatra kely. Ny takelaka fametahana sy ny fametahana raikitra dia tsy ilaina amin'ity fitaovana ity, izay manatsara tanteraka ny tsingerin'ny fanodinana marika amin'ny laser. Nanomboka teo, ny vokatra kely habeny dia tsy ho sarotra amin'ny fanamarihana laser. Miaraka amin'ny rafitra fametrahana ny maso Visual, ny "vokatra kely" dia lasa "lehibe". Ny olana marina izay tsy voafehin'ny milina fanamarihana nentim-paharazana dia azo vahana eto.
Ny masinina fanamarihana laser amin'ny toeran'ny maso azon'ny maso dia afaka mamoaka vokatra tsy tapaka, mahatsapa ny fametrahana marina sy ny marika tonga lafatra, izay manatsara be ny fahombiazan'ny marika. Mikendry ny olan'ny fomba sarotra ametrahana, ny toerana tsy dia tsara ary ny hafainganam-pandeha ateraky ny olan'ny endrika famolavolana, ny fakan-tsary amin'ny fakantsary CCD dia afaka mamaha ireo olana rehetra ireo amin'ny fampiasana fakan-tsary ivelany hisamborana ireo asan'ny vokatra amin'ny fotoana tena izy.
Ny fitaovana laser dia afaka mahita ny zoro sy toerana misy ny vokatra hahazoana marika marina. Raha ny fanamafisana ny fakan-tsary dia azo fehezina ao anatin'ny 0.01mm ny mari-pamantarana.